September 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Thet Wai September 29, 2014 at 8:39pm
ဟိုးအဝေးကြီးအထိ မျက်စိတဆုံး မြင်နေရသော ပင်လယ် ရေပြင်ကျယ်ကြီးကို ကမ်းစပ်တနေရာမှာ ထိုင်ရင်း တွေငေးစွာကြည့်နေမိသည်။ ထိုရေပြင်ကျယ်၏ အနားသတ်မှာ ချစ်စရာ တိမ်လိပ်ဖြူဖြူတွေ စီးမိုးထားသော တောင်တန်းများကို မြူတွေကြားမှတဆင့် မှုန်မှုန်လေး မြင်နေရသည်။ ပင်လယ်ပြင်ကျယ်မှာ တည်ငြိမ်နေသော အသွင်ကို ဆောင်ကာ ပြာလဲ့နေသည်။ တောင်တန်းများမှာ ခိုင်မာသော အသွင်ကိုဆောင်ကာ မှိုင်းညို့နေကြသည်။
ဘာဖြစ်လို့ တရုတ်အကျိုးစီးပွားထိရင် နည်းနည်းမှ သည်းညည်းမခံတာလဲ
Written by: နေထွန်းနိုင်
၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှ တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးမှုတွင် ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ တရားစွဲဆို ခံနေရသော မဖြူနှင်းထွေးအား ရုံးထုတ်စဉ် အထက်မြန်မာပြည် ဗကသအဖွဲ့ဝင် များက ပြန် လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆိုနေစဉ် (၀ဲ)၊ တောင်စောက်ဓာတ်ငွေ့တွန်းစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မှ အရိူချင်းတိုင်းရင်းသားများအား အမ်းမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်လာသည် ကို တွေ့ရစဉ် (ယာ)
၈၀။ မေး။ ။ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် ဆိုတာကဘာကိုဆိုတာလဲ
ကျနော်" ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် ''ဆိုတဲ့ တရားလေးဖတ်ရတော့ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပေးဖတ်ချင်ပါတယ်။
တစ်ခါက မုဆိုးလင်မယား နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ မိန်းမ ဖြစ်သူက မုဆိုး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူကို ဒီအလုပ်လုပ်တာ မကြိုက်ရှာဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့ တော့ သူ့ ယောကျာ်းကို ရှင် ဥပုသ်လေး ဘာလေး စောင့်ပြီး တရားလေး ဘာလေးလုပ်ပါဦးလား။
Yangon Media Group's photo.
ပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးရဲ့၁၂. ၉.၂ဝ၁၄ နေ့မှာ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့က မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိဒုက္ခသည် စခန်းများ၌ရောက် ရှိနေထိုင်ကြသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များ အား ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည် နေရာချထားပေးရန် စီမံဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ''ကိုရှင်းလင်းတင်ပြကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးနှင့်ဘာသာရေးအမြင် ဆောင်းပါး (ဒုတိယပိုင်း)
September 30, 2014 at 4:17am
ယနေ့လက်ရှိဘာသာရေးများတွင် အမျိုးသမီးများကို ဖိနှိပ်အချုပ်ချယ်ဆုံးဘာသာသည် အစ္စလမ်ဘာသာဖြစ်နေသည်ကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကို တာလီဘန်တို့ အုပ်ချုပ်စဉ်မှစ၍ မိန်းမများ အားလုံးကို ပြင်ပအလုပ်များ မလုပ်စေတော့ဘဲ အိမ်တွင်း၌သာ နေထိုင်ကြရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာဝန်များအတွက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ Physicians for Human Rights (PHR) မှ အမျိုးသမီးဆရာဝန်များ ဆေးရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့် မရတော့ခြင်းကို အထူးဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုလက်ရှိ အီရတ်နှင့် ဆီးရီးယားတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ISIS (အိုင်စစ်အစ်) သည် အမျိုးသမီးများ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်ပြီး သူတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော အသက် ၄၅ နှစ်အောက် မိန်းမများအားလုံး၏ လိင်အင်္ဂါစေ့ကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရမည်ဟု အမိန်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Author: lubo601 | 11:57 AM | No မှတ်ချက် |
Pay Hmya WaiYu‎ပေးမျှဝေယူ
Author: lubo601 | 11:56 AM | No မှတ်ချက် |
တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်ကို နှစ် ၅၀ ခန့် အုပ်ချုပ်တည်ဆောက် လိုက်သောအခါ ...
ရန်ကုန်မြို့သည် အခြား ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ နယ်သာလန် နိုင်ငံ အက်စတာဒမ် မြို့ကဲ့သို့ပင် ကုန်း ၊ ရေ နှစ်မျိုးဖြင့် ခရီးသွားလာနိုင်သည့် မြို့ဖြစ်လာခဲ့သည် ။ ပြည်သူများ သွားလာမှုလွယ်ကူ အဆင်ပြေစေရန် ကုန်းရေ နှစ်မျိုးသွား မော်တော်ယဉ်များကိုသာ အဓိက တင်သွင်းသည် ။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများရှိပီး ၊ ဆောက်လုပ်မှုကုန်ကြစရိတ်သည် စင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ် ၊ မာရီနာဘေး သဘောင်္ အဆောက်အဦးတို့ထက်ပင်များပြားသည် ။
Author: lubo601 | 11:53 AM | No မှတ်ချက် |
သွေးလှူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆအမှားတွေ အတွေးအမှားတွေ အများကြီး
ကြုံဖူးကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို အယူအဆအမှား အမြင်အမှားတွေကြောင့်
သွေးလှူနိုင်ရဲ့သားနဲ့ သွေးမလှူဖြစ်တဲ့လူတွေ အများကြီးပါပဲ။ မွန်မြတ်ဖြူစင်လှတဲ့ လှူဒါန်းမှု တစ်ခုကို လူတွေက လုပ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုအချက်တွေက တားဆီးထားသလဲ။
တပ်မတော်သားအမှု အရပ်ဘက် တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်
မုဒိန်းပြုကျင့်ရန်ကြိုးပမ်းသူအား သတ်ခဲ့သည့်အမျိုးသမီး ကွက်မျက်ခံရဖွယ်ရှိ
ဘီယာပွဲတော်၌ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦး ချုံများအကြား ဆီးသွားနေစဉ် အဓ္ဓမပြုကျင့်ခံရ
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရပ်သား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
မြဝတီမြို့၏ စစ်ရေး မငြိမ်သက်မှုတွင် လုပ်ငန်းရှင် များထက် အခြေခံ လူတန်းစားများ ပိုမိုထိခိုက်
ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် လူငယ် ကွန်ယက် များမှ မူးယစ် တိုက်ဖျက်ရေး လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်
မူးယစ်ဆေးဝါး ပတ်သက်သူများ ကြီးလေးသည့် ပစ်ဒဏ် ပေးမည်ဟု SSPP/SSA ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
ကမ်းရိုးတန်းသွား ရှပ်ပြေးအမြန်ရေယာဉ်လိုင်းများ ရပ်နားထားရာမှ ပြန်လည် ပြေးဆွဲမည်
ကနေဒါနိုင်ငံသားတဦးက တရုတ်ကျောင်းသားတဦးကိုသတ်ပြီး စာတိုက်ကနေပို့
နိုင်ငံရေးပါတီမရှိဘဲ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး လုပ်လို့မရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော (ရုပ်/သံ)
အီရန်ဟာ IS ထက်ကမ္ဘာကို ခြိမ်းခြောက်နေလို့ ဆို
ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲ ပြည်ပစွက်ဖက်မှု တရုတ်အစိုးရ သတိပေး
ချိုတူးဇော် ( ဘာသာရေး ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသူ ) သို့
Author: lubo601 | 11:45 AM | No မှတ်ချက် |
Nla Nay Lin Aung's status update.
ဒီနေ့ FB ပေါ်မှာ ညီလေး ရဲမိုး တင်ထားတဲ့ တုန့်ပြန်ထားတဲ့ Status လေး တစ်ခုနဲ့ စာပုံလေးတစ်ခုတွေ့မိတယ်။ စာပုံလေးကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တော့ အတော်စိတ်မကောင်း စရာ တွေ့ရ တယ်။ ချိုတူးဇော် ဘယ်သူဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါ။ သိလည်းမသိချင်ပါ။ သူ့ Status လေးဖတ်ကြည့်ပြီး အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်းလွန်စွာ နိမ့်ကျသူဖြစ်မှာ ခန့်မှန်းမိသွား၍ သိလိုစိတ်ကို မရှိတာပါ။
Author: lubo601 | 11:42 AM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိက အရောင်းစင်တာတစ်ခုတွင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်သူဌေးတစ်ဦးနှင့်အတူ ဓာတ်လှေခါးထဲတွင် မီးပျက်၍ ပိတ်မိနေ၏။ နောက်ဆုံးမှ ပြန်သူများဖြစ်သောကြောင့် အကူအညီတောင်းရန်မလွယ်ကူပေ။ ဒါ့ပြင် နောက်ရက်မှစ၍ အရောင်းစင်တာ တစ်ခုလုံး သီတင်းကျွတ် ၅ ရက် ပိတ်မည်ဖြစ်သည်။ အရေးပေါ်ခလုပ်ကို နှိပ်သော်လည်း အလုပ်မလုပ်သဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျသွား၏။
Author: lubo601 | 11:41 AM | No မှတ်ချက် |
Min Burma_________________________________________29 september 2014
ဒီရက်အတွင်းဖတ်မိနေပါသည်...ဆင့်ပွားလိမ်နည်း..ဟူရ်ျ..ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေများအတွက် စိုးရိမ်မိပါသည်....multi level marketing ဟု အမည်တတ်၍ အဆင့်မြင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြ ကာ ကြောငြာပွဲတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံပြီး တဆင့်ဖြန်ဖြူး အဖွဲ့ ဝငိသစ်ရှာရသော ကိုယ်စားလှယ် သစ်အဖြစ်ရာထူးတန်းပေး၍ လိမ်နည်းဖြစ်ပါသည်။
Author: lubo601 | 5:49 AM | No မှတ်ချက် |
သူဌေးမ ၀၀ကြီးတစ်ယောက် ဆင်းရဲသော လူငယ်လေး တစ်ယောက်အား လက်ထပ်ယူလိုက်၏။
ထိုသူငယ်မှာ သူမနဲ့ မယူခင်တည်းက ကဗျာရေးခြင်း ၀ါသနာပါမှန်း သူမ သိ၏။ ထို့ကြောင့် သူ့အား မင်္ဂလာဦးညတွင် သူမ၏ အလှအတွက် ကဗျာစပ်ခိုင်းလေသည်။ ထိုသူငယ်မှာလည်း ကြိုးစားပမ်းစား စပ်ပေးရှာပါ၏။
ဂျီဟဒ် မြန်မာပြည်၊ အယ်လ်ကိုင်ဒါနှင့် နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်ကွန်ယက်
Author: lubo601 | 5:48 AM | No မှတ်ချက် |
Htay Oung September 28, 2014 at 10:03pm
မကြာသေးခင်က ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက သတင်းထောက် ၏ မေး မြန်းချက်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားရာ အယ်လ်ကိုင်ဒါသည် မှေးမှိန်သွားကြောင်း၊ Is အစ်စ်တို့ ထင်ရှားလူ သိ များလာခြင်းကြောင့် အများအာရုံစိုက်ခံရစေရန် ယခုကဲ့သို့ ဂျီဟဒ်ကြေငြာခြင်းဖြစ် နိုင်ကြောင်း ပြောကြား သွားသည်ကို ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ ထိုဖြေကြားချက်မှာ ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် ကွဲလွဲပါသဖြင့် လုံးဝမှားယွင်းပါသည်။
ပြည်သူကို နှိပ်စက်ထားတဲ့ ပူဖောင်းတွေ ပေါက်ဖို့နိမိတ်ပြပြီ
Author: lubo601 | 5:47 AM | No မှတ်ချက် |
Written by: မာန်သူရှိန်
ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း တစ်နေရာကို စက်တင်ဘာလအတွင်းက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်လက်ထက် သုံးနှစ်ကျော်ကနေ လေးနှစ်နီးပါး ကာလအတွင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေဈေး၊ ရုံးခန်းငှားရမ်းခဈေးတွေဟာ မြေဈေးဝင်ကစားသူတွေကြောင့် ငှားရမ်းခအမြင့်ဆုံး ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးများစာရင်းမှာ အဆင့် ၃ အထိ ခုန်တက်သွားခဲ့ရတယ်။
Author: lubo601 | 5:07 AM | No မှတ်ချက် |
တစ်ခါက လင်မယားနှစ်ယောက်တွင် ယောက်ျား ဖြစ်သူက
computer crazy။ အဲ့ဒါနဲ့ မိန်းမဖြစ်တဲ့သူက သူ့ကို ကွန်ပျူတာလောက်တောင် အလေးမထားဘူးဆိုပီး စကားအချေအတင်များကြပါလေရော။ များလဲ များချင်စရာဘဲ။ သူ့ယောကျာ်း ပြန်ဖြေတဲ့ပုံကိုက
မိန်းမ။ ။ ရှင်က ကျွန်မကို ဖုတ်လေတဲ့ငါးပိ ရှိတယ်လို့တောင် မထင်ဘူး။
ယောက်ျား။ ။ Set Default
28september 2014 posted by khin khin
သူမကိုရွာက နတ်ဆိုး သခင်မလို့ နောက်ကွယ်မှာခေါ်ကြရဲ့ ၊ သူမအကြောင်းသိတဲ့ သူတွေ ကတော့ တရင်းတနှီးမလုပ်ရဲ အနားမကပ်ရဲ....။
သခင်မနဲ့ ကြိုက်တဲ့ ကောင်လေးတယောက်မြွေကိုက်လို့ ဆုံးသွားကတဲက ရွာကသူတွေ ပြောနေကြတာတော့ ကောင်လေးမသေခင် ချိန်းတွေ့ ကြရင်းပြသနာဖြစ်ကြတယ်တဲ့... ထူးခြားတာက သခင်မ စိတ်ဆိုးလာရင်မျက်ထောက်တွေနီလာပြီး အံကြိတ်တယ် သွားတွေ တကျိကျိမြည်အောင်ပါဘဲ....။
ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ထက်ပိုပြီး ကွဲရှခဲ့ပါတယ်
Author: lubo601 | 10:01 PM | No မှတ်ချက် |
Nyein Wai September 28, 2014 at 1:24am
‘၀မ်းနည်းဝမ်းသာ’ ဇာတ်ကားထဲက ကဗျာဆရာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီးမြတ်လေး တုံးလုံးလှဲပြီး မိုးကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ရင်း ကဗျာတွေရွတ်နေခဲ့တာ။ ဒီနေရာလေးမှာပဲ ညငှက်မလေးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး မြင့်မြင့်ခင်က တုံးလုံးလှဲပြီးကဗျာရွတ်နေတဲ့ ကဗျာဆရာကို ၀င်တိုက်မိတာ။ ကဗျာဆရာနဲ့ ညငှက်မလေးတို့ စတင်သိကျွမ်းကြရတာ။
woman health 28september2014
၁။ ကိုယ်ဝန် ပဌမ (၃) လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ခါးတုတ်၊ ဗိုက်ဖေါင်းလာတာအပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စမှာ ထွက်လာကြတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကြောင့် ရင်သား တင်းပြီး ကြီးထွားလာမယ်၊ နာမယ်။ ပျို့ချင်-အန်ချင်ဖြစ်မယ်။ အားကုန်သလိုဖြစ်လို့ မကြာမကြာ နားရ-အိပ်ရမယ်။
နယူးယောက်မြို့က လှပျိုဖြူတစ်ဦးဟာ တက်ဆပ်ပြည်နယ်ဘက်ကို ကားမောင်းသွားရင်းနဲ့ တောလမ်းတနေရာမှာ ကားပျက်သွားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ရက်အင်ဒီးယမ်းလူငယ်တစ်ယောက်က မြင်းတစ်စီးနဲ့ ရောက်လာသတဲ့။
သူမကို အနီးဆုံးမြို့ကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။
ခပ် အေး အေး နေ တတ် လာ ပြီ လို့ ထင် နေ တာ ....အော် .... အို လာ ပြီ ပဲ
1.ခပ် အေး အေး နေ တတ် လာ တယ်၊ ဆူ ညံ နေ တဲ့ ပွဲ လမ်း သ ဘင် တွေ ကို တ ဖြည်း ဖြည်း နဲ့ မ ကြို က် တော့ ဘူး။
2.ရင်း နှီး တဲ့ လူ တွေ နဲ့ ဆို ပြော မ ကုန် ဘူး ၊ တ စိမ်း တွေ နဲ့ စ ကား ပြော နဲ လာ တယ်၊ ၀ါ သ နာ တူ တွေ နဲ့ ပဲ ပေါင်း သင်း ဆက် ဆံ ချင် တယ် ။
သိမှုနယ်ပယ် (ဆောင်းပါး၊ ရိတ်ခြေ)
ဂျပန်တွေ အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်လည်း သိပ်ကိစ္စမရှိဘူး...တဲ့၊ သူတို့ဆီမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားပေါင်းစုံက စာအုပ်စာတမ်းမျိုးစုံကို ဂျပန်ဘာသာနဲ့ ပြန်ထားကြပြီးသား...တဲ့၊ ကြားဖူးတယ်။
သိရသလောက် ဒီအနားက ထိုင်းမှာတောင် နယူးယော့ခ်မှာ နာမည်ကြီး စာအုပ်တစ်အုပ် အသစ်ထွက်တာနဲ့ သူတို့မှာလည်း ထိုင်းဘာသာနဲ့ တစ်ခါတည်း ဘာသာပြန်ပြီးသား ရှိကြတယ်။
Siam Paragon အပေါ်ထပ်က Kinokuniya မှာ သွားကြည့်၊ အင်္ဂလိပ်မူရင်း စာအုပ်အသစ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ထိုင်းဘာသာပြန်တွေပါ တစ်ခါတည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်။
သူတို့တွေဆီမှာ စာဖတ်သူ ဈေးကွက် ရှိတာလည်း ပါမယ်။ အစိုးရတွေက အရေးကြီးတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ဘာသာပြန်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပေးတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု ဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်စေရန်
ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု ဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်စေရန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်သော မိသားစု ဘဝလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်စေရန် ဒီစာလေးကို ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။ လူတစ်ယောက် အတွက် စိတ်ချမ်းသာဖို့ ဆိုတာ အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းသာဖို့ကို ဦးစားပေးပြီး နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်တမ်း (၈)။ ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် ဖွဲ့ စည်းရေး နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်စပ်မှု
Aung Htoo September 28, 2014 at 6:05am
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖွဲ့ စည်းရေး ကို လာမည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးရန် သဘောတူထားခဲ့ပြီးမှ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က ပြန်လည်ဖျက်သိမ်း လိုက်ကြောင်းကြားရသည်။ စစ်အစိုးရ နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ခေါင်းဆောင်များကတိမတည်ဟု တဘက်က အဆိုးမြင်နိုင်သော်လည်းအခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်း ဟူသည့် မြန်မာဆိုရိုးစကားရှုဒေါင့်မှ ကြည့်လျှင်မူအကောင်း မြင်နိုင်ပါမည်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ များပါ ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းမည့်အခြေခံတွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဖွဲ့ စည်းရေးကို ၄င်းတို့အနေဖြင့် အတိအကျ သဘောတူနိုင် မတူနိုင်ဟူသည့်အပေါ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိစေရန် ဆက်လက်ဆွေးနွေးခွင့်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ ယခုကဲ့သို့ ဘက်နှစ်ဘက် ဆွေးနွေးခွင့်ရနေသည့် အချိန်တွင် ယင်းကိစ္စအာမခံချက်ရရှိထားမှ သာလာမည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ အကျိုးရှိပါမည်။
Author: lubo601 | 9:06 PM | No မှတ်ချက် |
ဟောင်ကောင်တွင် မေတ္တာတရားနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မြို့လယ်သိမ်း လှုပ်ရှားမှု စတင်
ယူကရိန်းအစိုးရစစ်တပ် ဒွန်းညက်မြို့လေဆိပ်တွင် ပိတ်မိ
ဗန်းမောက်ရှိ ရွှေတွင်းကုမ္ပဏီ မှ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၍ တရုတ်နိုင်ငံသား နေရာတွင်သေဆုံး
ပီအာစနစ် တင်သွင်းသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရာမှာ ရခိုင်ဒေသခံတွေသဘောထားကို အရင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆို
ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အယူအဆတွေ ဘေးဖယ်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်ဖြစ်ကြောင်း ဘန်ကီမွန်း ပြောကြား
စစ်တပ်မှ နှိပ်စက်မှုကြောင့် မြေပုံမြို့နယ်မှ ရွာသားတစ်ဦး မျက်လုံးတစ်ဖက် ဒဏ်ရာရရှိ
မြောက်ဦး နန်းရာကုန်းထက်မှ စိတ်ကြွးဆေးပြား လေးသိန်းကျော် သိမ်းဆည်းရမိ
မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်တွင် မဖွယ်မရာပြုလုပ်သူ အမျိုးသမီးများကို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်
အင်္ဂလန်တွင် ကျင်းပမည့် Miss World beauty 2014 ပြိုင်ပွဲအတွက် အလှမယ်ရွေးချယ်
Soe Min September 27, 2014 at 11:09am
“သည်ကမ္ဘာမှာ ယောင်္ကျားများဟာမယုံရဆုံး၊ မြက်မြက်ကလေးစားဖို့ ပလီပလာ ဥာဏ်ဆင်သုံး၊ တချို့တလေတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်လိမ်မာတယ်။ ဒါအလွန်ပဲ ရှားတယ်။” တဲ့။
အန်တီပုလဲကြီးကတော့“ဝင်္ကဒီပနီယောင်္ကျား” သီချင်းနဲ့ အယုံအကြည်မရှိ အဆိုတင်သွင်းလိုက်၊ “ကိုကို ယောင်္ကျားမဟုတ်ဘူး” သီချင်းနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်ပွဲလုပ်လိုက်နဲ့ တို့တတွေကို “မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့မောင်ပါကွယ်”ဆို ပေါ်တင်ကြီး နှိပ်ကွပ်သွားဖူးပါတယ်။ သူပြောလည်း ပြောချင်စရာပါပဲ။ ကိုယ်တွေကရော ယုံရလို့လားလို့ မေးရင် ကွကိုယ် ချင့်ယုံပေါ့ ညလေးတို့ညကြီးတို့ရယ်။ ကုက္ကို ကြီးတွေက မလစ်ရင် ဘာမမလုပ်ပါဘူး။ မယုံရင်လည်း မညာပါဘူး။ မိတော့လည်းတစ်ခါတည်းပါ။ အမှန်တရားဆိုတာ ချစ်သူ နားခါးမှာစိုးလို့ သကာလေးပါးပါး အုပ်ပေးထားရတာ။သိရင် သူတို့ပဲ စိတ်ဆင်းရဲနေရမယ် မဟုတ်လား။ အားလုံးကို ပျော်စေချင်တာ ကိုယ့်အားနည်းချက်ပေါ့။စေတနာတွေပါ စေတနာတွေပါ။ သို့သော်လည်းပဲ ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်က “ဟဲ့ ဟဲ့။ နေကြစမ်းပါဦး။ အရမ်းကြီး မယုံကြပါနဲ့ဦး။
Author: lubo601 | 10:34 AM | No မှတ်ချက် |
"အင်္ကျီကိုယ်ကျပ် မဲကုံးစပ်နှင့် ရေခပ်လာတာမြင်…………… သျှိုး
အပျိုလှလှ ကြုံတွေ့ရ၍ ခဏ စာမသင်ချင်ဘူး …………… သျှိုး
ကိုရင်ဝတ်က ဇွတ်တရွတ် ခွာတော့ဆို …………… သျှိုး
ထဘီကိုမ ဒူးကိုကြွ သူကဘာလိုလိုနှင့် …………… သျှိုး
ပြုံးချိုချိုငယ် ခင်ပျိုကြိုက်ဟန်ဆောင် …………… သျှိုး
အာဖဂန်နိုင်ငံက သေဒဏ်ပေးလိုက်သည့် အုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မကျင့်မှု
Author: lubo601 | 10:28 AM | No မှတ်ချက် |
Min Burma added3new photos.
လူထုရဲ့တခဲနက်ဆန့်ကျင့်မှုကို ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မကျင့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် အာဖန်အမျိုးသား ၅ ဦးကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါပြီ။ သြဂုတ်လက ကဘူးလ်မြို့ကို ပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီး ၄ ဦးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အတွက် သူတို့မှာ အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရလို့ပါပဲ။ ကျန်အမျိုးသား ၂ ဦးကိုတော့ ဒီသီတင်းပတ်မှာပဲ အယူခံတရားရုံး က ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Author: lubo601 | 10:22 AM | No မှတ်ချက် |
မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ရတနာပုံနေပြည်တော် မဟာအောင်မြေ
အပ္ပဿုတာယံ ပုရိသော၊ ဗလိဗဒ္ဓေါဝ ဇီဝတိ။
အယံပုရိသော၊ ဤယောက်ျားသည်၊ အပ္ပဿုတော၊ ဗဟုသုတနဲတယ်၊
ဗဟုသုတနဲတာ့ မြတ်စွာဘုရားက ကဲ့ရဲ့တော်မူတယ်။ ဘယ်လောက်ကဲ့ရဲ့
သလဲဆိုရင်.. ဗလိဗဒ္ဓေါဝ ဇီဝတိ-နွားလားကြီးလိုပဲ အသက်ရှင်နေတယ် တဲ့။
နွားတွေ မြက်စားပြီးတော့ ဝတာပဲ ရှိတယ်၊ ဘာဗဟုသုတမှ မရှိဘူး။
အိုင်ဖုန်းနုသတိ ။ ။ ဿ
Author: lubo601 | 8:11 AM | No မှတ်ချက် |
၁။ ဆမ်ဆောင်း၊ အိုင်ဖုန်းလေးငါးခြောက်ခွန်တွေ ခဏခဏထွက်လာတာကြုံရကြားရတော့ ကျုပ်မလည်း မဆီမဆိုင် ဖျာပုံမယ် တင်တင် အေး၊ ဒေစီကျော်ဝင်း၊ ဝါဝါဝင်းရွှေ၊ ခင်သန်းနု၊ ရှရွန်စတုန်း၊ ဆိုဖီယာလောရင်း၊ မာရီလင်မွန်ရိုး၊ ရီကွယ်ဝှက်ခ်ျ၊ရှရီဒေဝီ၊ ရှမီလာတဂိုး၊ စိုးမြတ်သူဇာ ၊မြတ်ကေသီအောင်၊ မယ်စကြာဝဠာ များနဲ့ မော်ဒယ်အဟောင်းတွေကိုပြေးပြေးသတိရမိသဗျ။
Author: lubo601 | 8:06 AM | No မှတ်ချက် |
ပြည်သတင်း လူငယ်'s photo.
ကိုဝမ်း ရဲ့ Post လေးထဲက စိတ်မကောင်းဘွယ်ရာ သွေးကင်ဆာခံစားနေရသော ဝေဒနာရှင်လေး ကို တွေ့လိုက်ရပြီး ဒီနေ့ဖတ်မိခဲ့တဲ့ကင်ဆာနဲ့ ကညွှတ် ပတ်သက်နေပုံလေးကို စိတ်ဝင်စားမိခဲ့ပါတယ်…
အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်…ငွေအကုန်အကျလည်း သိပ်မများတာမို့ ဒီဆေးနည်းလေးကို မူရင်းအတိုင်း မျှဝေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ကြွရောက်လာကြတဲ့ ပါမောက္ခများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ စာပေ၀ါသနာရှင်များ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို အခုလို မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ ရင်းနှီးစွာ စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်တယ်ဆိုတာ ပထမဦးစွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။ (သြဘာသံများ)
ဒီကနေ့ည ကျမ ဟောပြောဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်က 'ကျမ တော်တော်ညံ့ခဲ့ပါတယ်' ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်ကို ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဒီစာပေဟောပြောပွဲကို တကူးတကန့် လာရောက်နားထောင်လိုတဲ့ ပရိသတ်အနေနဲ့ အံ့သြချင် အံ့သြမိမယ်။ စိတ်ပျက် လက်ပျက် ရီမိချင် ရီမိလိမ့်မယ်။ ဒီစာပေဟောပြောပွဲကို လာပြီးတော့ နားထောင်တာဟာ နင်တို့တွေ၊ ခင်ဗျားတို့တွေဆီက တော်တာတွေများ ကြားရမလား၊ အဲဒီမျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့ လာပြီးနားထောင်တာ၊ ညံ့တာတွေတော့ ငါတို့ မကြားချင်ဘူး၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ရီမိချင် ရီမိလိမ့်မယ်။ ကျမကလဲ ကျမ သိတ်တော်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးချင်တော့ ကျမဟာ ဘ၀မှာ တခါမှ မတော်ခဲ့ဘူးသေးပါဘူး။ (အော်ဟစ်သံများ)
Author: lubo601 | 8:03 AM | No မှတ်ချက် |
ခိုးမှုမသင်္ကာသူများကို စစ်ဆေးရာ သေမှုသေခင်း ဖွင့်လှစ်စုံစမ်း နေသောအမှုမှ သေဆုံးသူအား သတ်ပြီး ပစ္စည်းများလုယူခဲ့မှု ပေါ်ပေါက်
ထရန်စဖော်မာပုံးအား စစ်ဆေးသည့် လျှပ်စစ်နေ့စားဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
အာဖဂန်တနိုင်ငံလုံး အုန်းအုန်းကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားခဲ့သည့် အုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မကျင့်မှု
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ အဓမ္မပြုကျင့်သူ တစ်ဦး ထောင်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခံရ
အစိုးရနှင့် ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ မြ၀တီ၌ ပစ်ခတ်မှုဆက်ဖြစ်
သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ – အယ်ဒီတာတစ်ဦး
စိတ်ရှည်သည်းခံ ပြည်သူ့အစေခံ – မဟာနွယ်
ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလမ်းပေါ် မရောက်သေးဘူးလို့ အဖွဲ့ချုပ် ၂၆ နှစ်ပြည့်နေ့မှာ ပြည်သူထံ သတင်းစကားပါး
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်တဲ့ ၂၆ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့မိန့်ခွန်း၊ ကြေညာချက်၊ သဝဏ်လွှာ
မြ၀တီတွင် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွား
Disney ကာတွန်းဇာတ်ကောင် မစ်ကီနှင့် မီနီတို့အား မြို့တော်ဝန်ဦးလှမြင့် တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ သွားလာခွင့်ပြု
အချစ်ဦးမဟုတ်ပေမဲ့ J Mine Myi
iOS 8 တွင် ဓာတ်ပုံများကို hide လုပ်ခြင်း
iOS 8 တွင် ပါဝင်သည့် Photos app တွင် ဓာတ်ပုံများကို hide လုပ်နိုင်သည့် feature သစ် ပါဝင် လာသည်။ Hide လုပ်လိုက်သည့် ဓာတ်ပုံသည် iPhone မှ delete လုပ်ခြင်းနှင့် မတူညီပေ။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို delete လုပ်လိုက်သည့်အခါ ၎င်းသည် Recently Deleted အယ်လ်ဘမ်သို့ ရောက်ရှိ သွားပြီး ရက် ၃၀ အကြာမှသာ delete လုပ်ထားသည့် ဓာတ်ပုံများကို အပြီးတိုင် ဖျက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
ဆူရှီကြိုက်လွန်း၍ တုပ်ပြားကောင်များ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အတွယ်ခံရသူ
Author: lubo601 | 9:48 PM | No မှတ်ချက် |
ကုို ကွန်း added3new photos.
ဆူရှီဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာကျော် ဂျပန်ရိုးရာ အစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ယင်း အစားအစာကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကြိုက်နှစ် သက်သူ များပြားလှသည်။ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားပင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်စဉ်က တခုတ်တရ သွားရောက် စားသုံးခဲ့ရသည့် အစားအစာ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
The Express Times's photo.
ဓာတုကလျာ သနပ်ခါး လိမ်းသလားလို့ တစုံတယောက် က မေးလာမယ်ဆိုရင်ဖြင့် လိမ်းတယ်လို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။ သမိုင်းထဲကဓာတုကလျာမင်းသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထား ပြစရာ တွေ့ခဲ့ရ လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ က ပဲခူးမြို့မှာရှိတဲ့ ရွှေမော်ဓော စေတီကြီးကို ရောက်ရှိ ဖူးမြော်ခဲ့ရပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုသည်နှင့် အများဆုံး မေးမြန်းခံရသည့်မေးခွန်းမှာ ‘ဘာလေးလိုချင်လဲ’ ဆိုသည့် အမေးနှင့် ‘ဒီအတိုင်းမွေးမှာလား၊ ခွဲမွေးမှာလား’ ဆိုသည့် မေးခွန်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယမေးခွန်းမှာ မိခင်ဆန္ဒအရခွဲစိတ်မွေးဖွားရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံအချို့ တွင်တော့ မေးနိုင်ကောင်းမေးနိုင်မည်။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၆-၉)
Author: lubo601 | 9:46 PM | No မှတ်ချက် |
PNO ပြည်သူ့စစ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မိုင်းပွန်ကျေးလက်ရွာသားနှစ်ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရ
အစိုးရတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီညီလာခံ သံတွဲ ငပလီတွင် စတင် ကျင်းပ
ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်စခန်းအချို့တွင် ပြင်ပဒေသမှ ဝင်ရောက်လာသူများ ရှိနေဟုဆို
ငါးခြောက်များတွင် ခွဲစိတ်ခန်းအသုံးပြုဆေးကို ယင်မနားစေရန် ထည့်သွင်း၍ ရောင်းနေ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စာရင်းဝင် မြန်မာတို့၏ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး
ISIS စစ်သွေးကြွများကို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ရာတွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုမှ အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူးတစ်ဦး ပါဝင်
မြို့သစ်စီမံကိန်းအဆို ပြန်ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာ
စက်​မှုဝန်​ကြီးဌာန ၂ နှစ်​အတွင်း ကျပ်​သန်း ၉ သောင်း​ခန့်​ အရှုံး​ပေါ်
Author: lubo601 | 4:15 AM | No မှတ်ချက် |
ယောက္ခမလောင်းကြီးနဲ့ ချစ်သူလေးက မွေးနေ့တူတယ်။
ကျနော်ကလည်း ခရီးလွန်နေတော့... ...
အဝေးကနေပဲ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် ဝယ်ပို့လိုက်တယ်။
ချစ်သူအတွက်က နာမည်ကျော် ပြင်သစ်ရေမွေး။
ယောက္ခမကြီးအတွက်က လိုင်စင်နဲ့ကိုင်တဲ့ ပစ္စတိုတစ်လက်၊
ဘာဖြစ်လို့ တရုတ်အကျိုးစီးပွားထိရင် နည်းနည်းမှ သည်း...
ဂျီဟဒ် မြန်မာပြည်၊ အယ်လ်ကိုင်ဒါနှင့် နိုင်ငံတကာအကြ...
ခပ် အေး အေး နေ တတ် လာ ပြီ လို့ ထင် နေ တာ ....အော် ...
အာဖဂန်နိုင်ငံက သေဒဏ်ပေးလိုက်သည့် အုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မကျင...
ဆူရှီကြိုက်လွန်း၍ တုပ်ပြားကောင်များ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့...
ကွေးညွှတ်သွားသည့် iPhone6Plus ဓာတ်ပုံများ အွန်လို...
ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်နည်း
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးမ...
ထူးအိမ်သင်၏အတွဲခွေများမှ သီချင်းများ စုစည်းမှု
ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေး အပေါ် အားပြှိုင်မှုများ၊
မြသန်းတင့်၏ စာအုပ်များစုစည်းမှု (၅၆ အုပ်)
မြ န် မာပြ ည် မှာSex Worker
အဟောင်းတွေကြားမှာဆက်မနေချင်ဘူး သရ၀ဏ် (ပြည် )
ကလေးများရဲ့ ဘ၀ကို အကျိုးတက်ရောက်စေနိုင်သည့် မိဘမျာ...
iOS 8 မှာ မြန်မာလို ရေးနိုင်ပါပြီ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၁-၉)
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ဦးနှင့် အိပ်စက်ခြင်း
ကျနော် မျက်ရည်ကျခဲ့ရသောရုပ်သံ (၂) သို့မဟုတ် ခွန်အာ...
* ဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက်အကြောင်း * ကွန်ဆူးမား
#‎မိန်းကလေးတွေရဲ့‬ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်းမြင်ချင်ပါသလား?
"ဖိနပ်လေး တစ်ရန် အကြောင်း"
နေတတ်ရင် - သုည Nay Tet Yin - Thone Nya The Zero (O...
" သူခိုးဓါးရိုးကမ်းတဲ့ သစ္စာဖေါက်မှုကြီး " ဆောင်းပါ...
ဌ နဲ့ ဋ္ဌ ဘယ်လို အသုံးကွဲပါသလဲ..???
Chanakya စဏကျ၏ ထူးကဲကောင်းမွန်သည့် အတွေးအခေါ် (၁၅) ...
အင်မတန် အောက်တန်းကျခဲ့ဘူးသော ဖြစ်ရပ်များ